FSX ပြီးတော့သင်3နှစ်ပေါင်း5months ago #66
တစ်ခုတည်းသော2စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ။ အဘယ်သူမျှမစကား (ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်လျှင်, တခြားနေရာကပါယူ); နှင့်အခြားသူများမရှိချမှတ်ခြင်းပျော်စရာ
Rikoooo ရဲ့ site ပေါ်တွင်လေယာဉ်တစ်စင်းမှ Links များသာအားပေးအားမြှောက်ကြသည်မဟုတ်, ငါ Welcome Them!
ကိုယ်အဘို့အမျှ ....... ငါအမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း VA သို့၏ CEO ဖြစ်သူမိပါတယ်။ ကျွန်မအပေါ်ငါ့အချိန်အများစုကိုဖြုန်း FSX တာဝေးပစ်ကုန်တင်ကားများလုပ်ခြင်းသည်လေကြောင်းလိုင်းကိုငွေအများဆုံးဖြစ်စေသည်။ ငါပျံသန်းနေသောထိပ်ဆုံးငှက် ၂ ကောင်မှာ 2-747F နှင့် 800LCF ဖြစ်သည်။ ငါတို့မှာအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ရေယာဉ်စုရှိတယ်။
အသေးဆုံးငါ Dash 8-100 နှင့် Embraer အမွေအနှစ် 600 ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
အကြီးဆုံးငါ 747s နှင့် 707-320, နှင့် 777-200LR လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
အသက်အကြီးဆုံးဘိုးအင်း 314 နှင့် 707-320 ပါလိမ့်မယ်
အလျင်မြန်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကိုပြင်, Concorde ပါလိမ့်မယ်။ (အရမ်းရယ်ရတယ် "ချာလီ" ပြောခြင်းတို့နဲ့ရန်, ငါ "ကိုမီးပေါ်မှာ [ငါ့အ] ဆံပင်နှင့်အတူ Mach-2 မယ် [ငါရယ်] မဟုတ်လျှင်ပျော်ရွှင်ဖြစ်သွားခြင်းမရှိ" ပေါ့)
(ထို Osprey ဟဲသုံးပြီးလျှင်တကယ် boring, ဒါပေမယ့်အမြန်) အနှေးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကိုမပါဘဲကျွန်တော်သာရေနံတူးစင်ထွက်ရေနံတူးစင်လုပ်သားများပျံသန်းအသုံးပြုရသော V-22 နှင့် CH-47 ဖြစ်ပါသည်
အကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံး? ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးခက်ခဲတဲ့တဦးတည်းပါပဲ။ ငါ 707-320 နှင့် C-130 လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။
ငါဘယ်လိုမကြာခဏပျံသန်းသလဲ? ကောင်းပြီ, ရိုးသားဖို့ .... နီးပါး non-stop ။ ဒီတော့ဝေးဒီလငါ 461.39 နာရီ logged နှင့် 206,931 င့်
အဆိုပါလေကြောင်းလိုင်းအဘို့အပျံမရတဲ့အခါ, ကျနော်ပုံမှန်အားဖြင့် Tomcat ပျံပါလိမ့်မယ်။
ငါသုံးတဲ့ Rikoooo ငှက်အချို့အချို့ link ကို
B747-XXX က Mega အထုပ် (ငါသည်ဤထံမှ LCF ကိုသုံးပါ - ငါအရမ်းရယ်ရတယ် installed အားလုံးတို့သည် 747 megapacks ရှိသော်လည်း)
သို့မဟုတ်သင်သာ LCF ချင်လျှင် ...
B737-700 အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း (မဟုတ်ပါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေတပ်အတွက်ဒါပေမယ့်ငါကမနှင့် IT LOVE)
B777-200 (ငါသည်ဤဗူးအတွက်သူမြားကိုမဆိုအသုံးမပြုနေစဉ် .... ငါကမြင့်မားဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်ပါ!)
B707-42 (ငါဗိုလ်ကြီး Sim ဗားရှင်းကိုသုံးပါ, သို့သော်ဤရက်သတ္တပတ်ဒီတစ်ခုထွက်ကြိုးစားနေခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်! ပြန်လည်သုံးသပ်ညှိနေဖို့!)
FSX ပြီးတော့သင်3နှစ်ပေါင်း5months ago #69
ကျွန်မအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာအမှန်တကယ်ငါ Sim Giants Gran Canaria ရှုခင်းကို install ဖို့ကြိုးစားပြီးနောက်တက်ပြမှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမှားမတွေ့ရှိ (အချို့အရေအတွက်ကိုနှင့်အတူ) ရှုခင်းဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရှုခင်း file ကိုငါ့အပေါ်မှာအားလုံးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး FSX sp2 ။ အဲဒါကိုဖယ်ရှားပေမယ့်အမှားရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအ။ ကသောမတ်စ်ရုသသည် A320 / 330 နှင့်မည်ကဲ့သို့သည် A340 မိသားစု Multi-livery ဗူးကနေ VC ကိုပေါင်းစည်းဖို့ဖြစ်နိုင်မလား? နှစ်ဦးစလုံးဒီကနေ download လုပ်။
FSX ပြီးတော့သင်3နှစ်ပေါင်း5months ago #72
သငျသညျ post အဘို့အသငျသညျ Gh0stRider203 ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျနော်တို့အခုနည်းနည်းပိုပြီးသင်သိလျက်, ဖိုရမ်အပေါ်တစ်ဦးက Moderator အဖြစ်ကြိုဆိုပါတယ်။
Dariusssss: သင်ရိုးရှင်းစွာ၌သင်တို့၏ရှုခင်းစာကြည့်တိုက်ကနေရှုခင်းကိုဖယ်ရှားရန်ရှိသည်အမှားဖယ်ရှားပစ်ရန် FSX config ကို။ ငါ installer ကိုအတူမှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိလျှင်စစ်ဆေးရှုခင်းတစ်ခုကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ ကသာလွန်းရန်းကိန္နရီသို့မဟုတ်အခြားရှုခင်းနှင့်အတူဖြစ်ပျက်သလဲ?
သင့်ရဲ့ဒုတိယမေးခွန်းအဘို့, ဟုတ်ကဲ့ကိုသင်တို့အားငါသောမတ်စ်ရုသသည် A320 / 330 နှင့်တကွ, A340 မိသားစု Multi-livery ဗူးကနေ VC ကိုပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ဦး VC ကိုပေါင်းစည်းမှုစေမှာ google သို့မဟုတ် Youtube ကိုလဲ tutorial နှင့်အတူစစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီး
FSX ပြီးတော့သင်3နှစ်ပေါင်း5months ago #73
ဒါဟာရှုခင်းဒေသများ 117 နှင့် 123 ရှာဖွေနေပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးရှိနေကြသည်မဟုတ်။ scenery.cfg ခုနှစ်တွင်, နောက်ဆုံးသောရှုခင်းဧရိယာရှုခင်းအပေါ် 115-Add ဖြစ်ပါသည်, ကမှာအားလုံးရှိမယ့်ပေမယ့်အမှားလာမယ့်အပေါ်စောင့်ရှောက်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိပြဿနာများစေသည်တစ်ခုတည်းသောရှုခင်းဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။
အဘို့ဒါ့အပြင် BN-2 ကျွန်း FSX ဆိုးဆိုးရွားရွားကျိုးသည်။
FSX ပြီးတော့သင်3နှစ်ပေါင်း5months ago #95
အဆိုပါဖော်ပြခဲ့တဲ့ VC နှင့်တစ်ဦးသောမတ်စ်ရုသသည် A330 ပေါင်းစည်းဖို့ကြိုးစားနေပြီးနောက်ရလဒ်တော်တော်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကဆိုးဆိုးရွားရွားကျိုးပဲ့ခြင်း, A330s တဦးကိုဖယ်ရှားခဲ့ရသည်။ ငါကလုပ်မဆိုလမ်းမတှေ့နိုငျသောပေါင်းစည်းဖို့စိတ်ကူး၏ဦးပေးချင်ပေမယ့်မပေးကြဘူး။
FSX ပြီးတော့သင်3နှစ်ပေါင်း5months ago #97
Dariussssss wrote: အဖော်ပြခဲ့တဲ့ VC နှင့်တစ်ဦးသောမတ်စ်ရုသသည် A330 ပေါင်းစည်းဖို့ကြိုးစားနေပြီးနောက်ရလဒ်တော်တော်မကောင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကဆိုးဆိုးရွားရွားကျိုးပဲ့ခြင်း, A330s တဦးကိုဖယ်ရှားခဲ့ရသည်။ ငါကလုပ်မဆိုလမ်းမတှေ့နိုငျသောပေါင်းစည်းဖို့စိတ်ကူး၏ဦးပေးချင်ပေမယ့်မပေးကြဘူး။
ဒီနေရာမှာငါ့အချည် derailing c'mon..you're ယောက်ျားတွေ
Tech မှ probs are here: www.rikoooo.com/board?view=topic&catid=5&id=34 :P
FSX ပြီးတော့သင်3နှစ်ပေါင်း5months ago #99
စိတ်မကောင်း OK ကို, ငါ့မကောင်းတဲ့။
FSX ပြီးတော့သင်3နှစ်ပေါင်း5months ago #130
Dariussssss wrote: OK ကိုတောင်းပန်ပါတယ်, ငါ့မကောင်းတဲ့။
FSX ပြီးတော့သင်3နှစ်ပေါင်း4months ago #177
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အငြိမ်းစားယူအက်ဖ်အက်ဖ်အက်ဖ်အမှုထမ်းအကြီးအကဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အဓိကအားဖြင့် MATS ခေါ်စစ်တပ်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု / C97 သည်အနှစ်သက်ဆုံးလေယာဉ်ဖြစ်သည်။ Reeve AA ပျံသန်းမှုကို Alaska နှင့် Aleutian ကျွန်းများသို့လည်းပျံသန်းပါသည်။ Lockheed L-I88 Electra သည်မြောက်ဘက်အစွန်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးလေယာဉ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Convair the B-36 လေယာဉ်ပျံသန်းရန်အစဉ်အမြဲကြည့်ရှုနိုင်သည့် B-58 Hustler လေယာဉ်နှင့်စီးပွားဖြစ် 880/990 လှပသောမြန်ဆန်သောလေယာဉ်များကိုစူပါပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါ Capsim 707 & 727 ကြောက်မက်ဘွယ်ပျံသန်းကြဘူး add-onစျေးနှုန်းကောင်းကောင်း s ကို။ ငါ့မှာနာရီ ၈၀ လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ လေ့လာသင်ယူမှုတွေလေ့ကျင့်နေတုန်းပဲ။
FSX ပြီးတော့သင်3နှစ်ပေါင်း4months ago #183
ပထမဦးစွာ FCAIR ချွတ် .... ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာမှသင်၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့မိသားစုကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့ပေမယ့်ကိုယ့်အကြောင်းကိုနေ့စဉ်နျဌာနခှဲအတွက်ယခု6သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့အတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမစကားလုံးများကိုအစဉ်အဆက်အမှန်တကယ်တွင်သင်တို့ဆီသို့ငါကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ငါအစေခံချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမယ့်ဝမ်းနည်းစွာ, (ငါအဆုံးဟဲအထိခံစားရာ) မြို့ပြလေကြောင်းကင်းလှည့်ဖို့ကန့်သတ်ခဲ့သည်။
ကျွန်မကိုလည်း CS 707 တယ်နှင့်သူမ၏ LOVE ။ စတင်ခြင်း '' er တက်အရမ်းရယ်ရတယ်ငါအတော်လေးသေး lmao နေဆဲကြောင်း youtube ကဗီဒီယိုကိုတက်ဆွဲရန်ရှိသည်မှတ်မိလေပြီမဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုသည် CS ကို C-130 အရမ်းရယ်ရတယ်အခြားပုံပြင်ဖြစ်ပါသည်
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: FCAIR
0.304 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်